Isitudiyo, uHaynes-Ntuthuzela ngokuJonga okumangalisayo
Haynes, England, United Kingdom
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguDominic
Buyela emva kwaye uphumle kwesi situdiyo sizolile nesinesitayile sokuzenzela ukutya esinekhitshi elifakwe ikhitshi kunye ne-ensuite enobushushu obuphantsi bobushushu obuphantsi. Iyakonwabela iimbono ezintle zeGreen Sand Ridge kunye nokuhamba okuhle kunye nokuhamba ngebhayisekile ngqo emnyango wakho. Isiseko esifanelekileyo seChicksands Bike Park, iminyhadala yaseShuttleworth okanye ukonwabela nje le kona ithandekayo yelali yaseBedfordshire. Sijonge phambili ukukwamkela!
Qaphela: Sinendawo eyongezelelweyo yeendwendwe kwibhedi yesofa. Le yi-£10 eyongezelelweyo ngobusuku.
Indawo yangoku, eshushu engaxutywanga eyilwe kwisitayile selizwe lasekuhlaleni kule kona intle yelali yaseBedfordshire. Iflethi yindawo yokuhlala eguquliweyo kwaye ixhotyiselwe ukuzenzela ukutya ngokugqibeleleyo (iMicrowave, i-oveni, ifriji kunye newasha-somisi).
Isiseko esifanelekileyo kubo bonke abathandi bangaphandle baphonononga iGreensand Ridge entle enendawo eqengqelekayo, enamahlathi kunye neelali ezintle.
Ibhedi enkulu eyi-Voluminous King ene-sumptuous 13 tog down duvet kunye nemiqamelo kunye nelinen yebhedi yomqhaphu yaseYiputa yokuthokozela. Kukho ibhedi yesofa enye yokutsala undwendwe olongezelelweyo; ukuba uyafuneka, vele usithumelele umyalezo xa ubhukisha.
I-ensuite eneshawari enamandla, iradiyetha yetawuli yombane kunye nokufudumeza okushushu ngaphantsi kwetayile. Indawo yokugcina impahla iphantsi kwebhedi yokutsala iidrowa. Ukuxhoma iirakhi ezinehanger yeesuti, iilokhwe kunye needyasi.
Itafile encinci yokutya enezitulo.
Iziseko zokutshaja ze-USB, iisokethi ezi-2 ze-ethernet kwiflethi yonke.
Kukho indawo yokufundela eyahlukileyo/yomphezulu weofisi enesihlalo, isibane setafile kunye nesokethi zombane ze-USB ezikufutshane. IStudio ineWifi yayo ezimeleyo. Igama lokugqithisa linikiwe.
I-4K 40 intshi ye-smart TV ene-intanethi epheleleyo kunye nokufikelela kwiFreeview.
40" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Grey Hound Local Pub 5 ukuhamba ngomzuzu, inika ukutya.
I-Chicksands Bike Park ye-Mountain Bikers enomdla yimizuzu emi-5 yokukhwela umjikelo.
Jonga iNcwadi yesiKhokelo ngeenkcukacha ezithe vetshe.
Dominic and Nicola live in the beautiful village of Haynes with their 3 children and friendly dog. They enjoy biking and walking in the beautiful countryside that surrounds the property.
Uhlala ukuvuyela ukunceda okanye ukucebisa malunga nokuhamba kakuhle kwendawo, ii-pubs njl. Iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi kwisiza nangaliphi na ixesha ngokunkqonkqoza emnyango (ngasemva okanye ngaphambili) kwindlu enkulu okanye ngefowuni ephathwayo. Iinkcukacha zinikezelwe ngesheke kwiinkcukacha.
Uhlala ukuvuyela ukunceda okanye ukucebisa malunga nokuhamba kakuhle kwendawo, ii-pubs njl. Iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi kwisiza nangaliphi na ixesha ngokunkqonkqoza emnyan…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Haynes